MAX WAX | मोटर वाहन फ्रान्चाइज | Franchiseek
»फ्रेंचाइजी अवसरहरू»अधिकतम WAX फ्रेंचाइजी
अधिकतम WAX फ्रेंचाइजी
असीमित कमाई सम्भावितताको साथ भ्यान आधारित फ्रन्चाइज
MAX WAX को बारेमा
म्याक्स वैक्स फ्लीट लिमिटेड एक राम्रो स्थापित मोबाइल भेलिटिंग र डिटेलिंग कम्पनी हो जसले दक्षिण पूर्वलाई कभर गरीरहेको छ, शोरेहाम एयरपोर्टबाट संचालन गर्ने। १ 14 बर्ष भन्दा पहिले यो स्थापना भएदेखि यस व्यवसायले ठूलो वृद्धि देखेको छ। हामी व्यावसायिक र व्यापक रूपमा मान्यता दिइरहेका छौं जुन हामी अभ्यास गर्छौं, मात्र बजारमा सबै भन्दा राम्रो उत्पादनहरू प्रयोग गरेर, हाम्रो सस्तो मूल्य निर्धारण एक लक्जरी सेवाको बावजुद। हामी गतिशील, फिट, उत्प्रेरित र संचालित व्यक्तिहरू आवश्यक छन् जुन सफल हुन मनोवृत्तिले सुसज्जित छ। तपाईले पहिले नै MAX WAX द्वारा सेट गरीएको र हाम्रो ग्राहकहरु द्वारा अपेक्षित उच्च मापदण्डमा काम गर्न इच्छुक हुनुपर्दछ। यदि यो तपाईं हुन सक्नुहुन्छ भने कृपया यहाँ पढ्नुहोस् ...
अधिकतम WAX फ्रेंचाइजी अवसर
पूर्ण प्रारम्भिक २ हप्ता प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ, निरन्तर समर्थनको साथ।
एक पूर्ण बीमा, रखरखाव, सुसज्जित र ब्रान्ड भ्यान प्रदान गरिएको छ।
साप्ताहिक आधारमा उत्तम उत्पादनहरू र सफाई सामग्रीहरू उपलब्ध छन्।
ब्रान्डेड वर्दी, मार्केटिंग सामग्री र भौगोलिक टेलिफोन नम्बरको प्रावधान।
अतिरिक्त राजस्व स्ट्रिम उपलब्ध (स्मार्ट मर्मत आयोग)
चलिरहेको बिक्री प्रशिक्षण र प्राविधिक सल्लाह।
के समावेश गरिएको छ?
हामी तपाईंलाई उडान सुरूमा जानको लागि आवश्यक पर्ने सबै चीजहरू प्रदान गर्नेछौं।
हामी कम्तिमा £ १1650० v भ्याट् मूल्य कन्ट्र्याक्ट्स तपाईलाई हप्तामा प्रदान गर्दछौं।
हामी तपाईंलाई प्रदान गरेको कुनै पनि सम्झौताबाट %०% लिनुहोस्।
सबै आत्म-उत्पन्न करारहरूबाट %०% लिनुहोस्।
ब्रान्डेड र सुसज्जित मर्सिडीज सिटान भ्यान।
उपकरण मर्मत र प्रतिस्थापन।
MAX WAX HQ मा साप्ताहिक पुन: ताजा र समर्थन सत्रहरू।
भौगोलिक फोन नम्बर।
सामाजिक मिडिया सेट अप र समर्थन।
चलिरहेको विज्ञापन-शब्द अभियान।
न्यूनतम प्रशासनिक जिम्मेवारीहरू।
कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्र छैन।
छुट्टी कभर ले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँ ग्राहकहरु आराम गर्न को लागी हेरिन्छ।
विस्तार सुविधा, ब्राइटन सिटी एयरपोर्टमा तपाईंको प्रयोगको लागि
चलिरहेको प्रशिक्षण, समर्थन र मार्गनिर्देशन।
पूर्ण युके चालकको इजाजतपत्र।
औसतमा एक हप्ता .5.5. days दिन अपरेट गर्न उपलब्ध छ।
सहि मनोवृत्ति र ड्राइभ सफल गर्न प्रतिबद्धता।
सफा, सफा र राम्रो संगठित व्यक्ति।
के MAX WAX तपाइँको लागि हो?
सही भ्यालेटर भनेको सही मनोवृत्ति भएको कोही हो। हामी मनोवृत्ति सिकाउन सक्दैनौं तर यसको मतलब कठिन ग्राहकहरुमा पनि ठूलो ग्राहक सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुनु, साइटमा ग्राहकहरुलाई अप-बेच्न को लागी सक्षम हुनु, ब्यापारको हेरचाह गर्नु र भरपर्दो हुनु हो। हामी म्याक्स WAX भित्र रहेको कुञ्जी ज्ञान सिकाउनेछौं, कसरी राम्रोसँग कार्य सम्पन्न गर्ने र कसरी तपाइँको ग्राहकहरूलाई शिक्षित गर्ने। यस व्यवसायको भौतिक प्रकृतिको लागि कोही यस्तो शारीरिक आवाश्यक हुन्छ जो शारीरिक रूपमा प्रशस्त उर्जाको साथ फिट छ। दैनिक तथ्यमा MAX WAX मानक प्राप्त गर्न सही ढ carried्गले सञ्चालन गरियो भने भ्यालेटि demanding एक शारीरिक माग गर्ने गतिविधि हो भन्ने तथ्यलाई पत्याउन कुनै अप्ठ्यारो छैन। एक पटक हामीले सही व्यक्तिलाई भर्ती गरेपछि हामी हाम्रो समय तपाईंको लागि समर्पित गर्दछौं जुन तपाईं हाम्रो टीमले प्राप्त गरेको सफलताको एक टुक्रा महसुस गर्न सक्षम गर्न सक्दछौं।
सम्पर्कमा रहनुहोस् ...
यदि तपाईं अझै उत्साहका साथ पढ्दै हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंबाट पछाडि सुन्न अवसरको स्वाद लिन्छौं। कृपया तल सोधपुछ फारम भर्नुहोस् र हामी थप जानकारीको साथ सम्पर्कमा रहनेछौं।